सेवा गर्ने नयाँ बिक्री हो Martech Zone
म एक उपस्थित थिए इंडियानापोलिस AMA लन्चोन जहाँ योएल बुकले मार्केटिंगको बारेमा पावर अफ वनको बारेमा कुरा गर्‍यो। उसको प्रस्तुतिले ग्राहकलाई बढी प्रभावकारी रूपमा सेवा दिन डिजिटल मार्केटि using प्रयोग गरी वरिपरि ठूलो जानकारी समावेश गर्‍यो। जे होस्, त्यहाँ कार्यक्रमबाट धेरै टेकवेहरू थिए, त्यहाँ एक थियो जो मसँग अडीयो। धारणा कि: सेवा प्रदान गर्ने नयाँ बिक्री हो। मूल रूपमा, यो विचार कि एक ग्राहकलाई मद्दत गर्नु उनीहरूलाई निरन्तर बेच्न कोशिस गर्नु भन्दा बढी प्रभावकारी छ।
यो कसरी तपाइँको ईमेल मार्केटिंग अभियानहरूमा लागू हुन सक्छ? सहयोगी ईमेलहरू पठाउनुहोस् जुन तपाईंको ग्राहकहरूको लागि विशेष उद्देश्य प्रयोग गर्दछ। यहाँ केहि उदाहरणहरू छन्:
उत्पाद अनुस्मारक: यदि तपाइँको उत्पादनको लागी लागू छ भने, तपाइँको ग्राहकहरु लाई एक रिमाइन्डर ईमेल पठाउनुहोस् जब तिनीहरु पुन: अर्डर गर्न वा पुनःफिल खरीद गर्न आवश्यक हुन्छ।
त्यागिएको शपिंग कार्ट रिमाइन्डर: कहिलेकाँही, ग्राहकहरूले आइटमहरू उनीहरूको कार्टमा खरिदको मनसायले राख्छन्, तर समाप्त हुन सक्षम हुनु भन्दा पहिले मात्र अवरोध गरिन्छ। त्यागिएको शपिंग कार्ट ईमेल उनीहरूलाई सम्झाउन को लागी एक विनम्र तरीका हुन सक्छ कि त्यहाँ अझै आईटमहरू छन् र उपभोक्ताहरूलाई छिटो पछाडि जान र उनीहरूको खरीद पूरा गर्न सजिलो बनाउँदछ।
उत्पाद समीक्षा रिमाइन्डरहरू: यी ग्राहकहरु लाई पठाउनको लागी एक राम्रो विजयी ईमेल अनुस्मारक हो। पठाउँदै, तपाईं आफ्ना ग्राहकहरूलाई उनीहरूको हालसालै खरीद गरेको उत्पादमा एक समीक्षा भर्न सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यद्यपि राम्रो उत्पादन समीक्षाले कम्पनीको रूपमा तपाईंको विश्वसनीयता बढाउन सक्छ र भविष्यका ग्राहकहरूलाई तपाईंको उत्पादनमा बढी विश्वास दिन्छ।
यदि तपाईंले यी ईमेलहरू तपाईंको ईमेल मार्केटिंग प्रोग्रामको अंशको रूपमा थप्नुभएको छैन भने किन? तिनीहरू ग्राहकको व्यवहारको आधारमा स्वचालित रूपमा पठाउन सेट अप गर्न सकिन्छ र तिनीहरूले तपाईंको ग्राहकहरूलाई बढी प्रभावकारी रूपमा सेवा गर्दछ, साथ साथै तपाईंको तल लाइनमा अतिरिक्त राजस्व ल्याउँदछन्। एक स्लैम dunk जस्तै ध्वनि, सही? यदि तपाईंलाई तपाईंको समग्र ईमेल प्रोग्राममा यी प्रकारका ईमेलहरू कार्यान्वयन गर्न मद्दतको आवश्यकता छ भने, कृपया आज डिलिभ्रामा जानुहोस्।
अरू कुन ईमेल उदाहरणहरू तपाइँ ग्राहकहरू सेवा भन्नुहुन्छ?
टैग: परित्याग शपिंग कार्टईमेलइमेल मार्केटिङउत्पाद अनुस्मारकहरूखुद्रा
स्टीफन डब्ल्यू एन्डरसन
हाम्रा क्लाइन्टहरूलाई मद्दत गर्न सजिलो हुन सक्छ वा यो एक काम हुन सक्छ, यो कसरी हेर्छ भन्ने आधारमा। मैले सधैं फेला पारेको छु कि मेरा ग्राहकहरूलाई मद्दत गर्नु एक धेरै लाभदायक उद्यम हो। राजस्वको हिसाबले मात्र होइन, सामाजिक पुँजीको हिसाबले पनि।
र यी दिनहरू, प्रेसको मात्रासँग जुन खराब ग्राहक अनुभवहरू सोशल मिडियामा प्राप्त हुन्छन्, यसले हाम्रा ग्राहकहरूलाई राम्रोसँग सेवा दिन पहिले भन्दा बढी अर्थ दिन्छ। तपाईलाई थाहा छैन कसलाई थाहा छ वा नयाँ ग्राहक प्राप्त गर्न को लागी ब्याक च्यानल हुन सक्छ।